အရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံခဲ့သော ဘ၀တစ်ခု၏ ရာဇ၀င်: January 2009
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Saturday, January 31, 2009 in စေတနာနဲ့ပါ
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Saturday, January 31, 2009 in ဟာသ
မနီသည် အတန်းထဲတွင် အမြဲအိပ်ငိုက် လေ့ ရှိ သည်။တစ်နေ့ မနီအိပ်ပျော်နေစဉ်
ဆရာမ။ ။ မနီ ကမ္ဘာ ကြီး ကို ဘယ်သူ ဖန်ဆင်းခဲ့လဲ?
မနီ အိပ်ငိုက်နေသဖြင့် မကြားသောကြာင့် သူမ နောက် တွင် ထိုင်နေ သော ကိုဖြိုးမှ ဘော့ပင်နှင့် ထိုး၍ သ တိ ပေးလိုက် သည်။
ထိုအခါ -မနီ။ ။" ဘုရားသခင်" ( လန့်သွား သဖြင့် ရောင်၍ အော်လိုက်သည၊် ထို့နောက် သူမပြန်လည် အိပ် ပျော်သွား ပြန်သည်)။
ဆရာမ။ ။ တော် လိုက် တာ၊ နောက် တစ်ခု ထပ်မေးမယ်၊ တို့ ရဲ့ ကယ်တင်ရှင် က ဘယ်သူလဲသမီး ?
ဆရာမ မေး သည် ကို မနီ မကြား ၊ အိပ် လို့ ကောင်း နေသည် ၊ ထို့ ကြောင့်ကိုဖြိုးမှ ဘော့ပင်ဖြင့် ထိုး၍ သတိ ပေး ရပြန် သည်။
မနီ။ ။ဂျီးဆပ် ခရိုက်စ်"ဆရာမ။ (လန့်သွားပြန် သဖြင့် ရောင်၍ ထအော်ပြန်သည်၊ ထို့နောက်တဖန်အိပ်ပျော်ပြန်လေသည် ) " ။
မှန် ပါ တယ်၊ ဆရာမ နောက်ဆုံး တစ် ခု မေး ချင် တာ ကတော့ ၂၃ ယောက်မြောက်ကလေး မွေးပြီးတဲ့နောက် မှာ ဧဝ က အာ ဒမ် ကို ဘာ ပြောခဲ့ လဲ ????
ဒီတစ်ခါ တော့ ကို ဖြိုး အိပ်ပျော်နေသော မနီ ကို ဘော့ ပင်နှင့် နာနာ ထိုး၍သတိပေးလိုက် သည်။မနီ အတော် နာ သွား သည်။ထို့ကြောင့် အိပ် ယာ မှ နိုး လာ သဖြင့်ရုတ်တရတ် ထလိုက် ကာ -
ဆရာမ " ခြေနှစ်ချောင်းနဲ့ အိမ်မှာမွေးတဲ့ အကောင်တစ်မျိုးရှိတယ်။မနက်မိုးလင်း နေထွက်တာနဲ့ အိမ်ရာထတော့လို့ ကလေးတို့ကို ထခိုင်းတတ်တယ်။မထမချင်းလည်း အော်နေတတ်တယ်။ အဲတာ ဘာအကောင်လဲ သိလား"ကလေးတွေက ဘာအကောင်မှန်း မသိလို့ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်နေကြတယ်။
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Friday, January 30, 2009 in ကြော်ငြာလေးတွေ
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Friday, January 30, 2009 in ချစ်သူဖတ်ဖို့
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Thursday, January 29, 2009 in ကဗျာ
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Wednesday, January 28, 2009 in ချစ်သူဖတ်ဖို့
တစ်အချက် - မိန်းကလေးဖြစ်ရမည်။ အမရာ၊ ကိန္နရီ၊ မဒီ၊ သမ္ဗုလတော်လေးဝတွင် သုံးဝလောက်ဝင်လည်းဖြစ်ပါသည်။
ရှာရာပိုဗာလောက် မလှရင်နေပါ။ သို့သော်ပပဝတီလောက်ချောရင် အပြစ်မပြောပါ။မီးမလာသည့်အချိန်ဆိုလျှင် ခုနှစ်ဆောင်တိုက်ခန်းမီးမထွန်းပဲလင်းနေမည့်အတွက် ဖယောင်းတိုင်ဖိုး မီးစက်ဖိုး ဓာတ်ဆီဖိုးသက်သာမည်။
နှစ်အချက် - အိမ်ဖော်ကို လက်ထပ်ခြင်းမဟုတ်သည့်အတွက်မီးဖိုချောင်ထဲက မထွက်ပဲ ထမင်းဟင်းချက် အဝတ်လျှော်
မီးပူတိုက် စသည့်ဗာဟီရကိစ္စများဖြင့် အလုပ်ရှုပ်ခိုင်း ထားမည်မဟုတ်ပါ။ အိမ်ရှင်မ ပီသရင်ကျေနပ်ပါမည်။
သုံးအချက် - ဒီခေတ်ကြီးထဲတွင် ဦးနှောက်ကောင်းဖို့လိုပါမည်။ကျွန်တော်ကလက်သီးဆုပ်ပြလျှင်သူကလက်ဝါးတစ်ခါတည်း
ဖြန့်ပြတတ်သောအရည်အချင်းရှိရမည်။ပညာအရည်အချင်းကျွန်တော့်ထက်သာလည်း အရေးမကြီးပါ။အဓိက က တိုင်ပင်ဖော် တိုင်ပင်ဖက် တိုးတိုးဖော်ဖြစ်ရပါမည်။ မှတ်ချက်။ ။နားမလေးရပါ..
လေးအချက် - ကျွန်တော် အိမ်တွင် ဘီယာသောက်သည့်အခါ အမြည်းမလုပ်ခိုင်းပါ။သူ့အသိစိတ်ဓာတ်ကိုသာ တန်ဖိုး
ထားလေးစားပါမည်။သူလည်းသောက်ချင်လျှင် ကျွန်တော့်ဘေးတွင် ဝိုင် သောက်ခွင့်ပေးမည်။
ငါးအချက် - အိမ်တွင်တစ်ယောက်တည်းသောက်ရသည်မှာပျင်း၍ အပြင်မှာထွက်၍သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းများနှင့် ဆယ်ခွက်ဆယ်ဖလားချီးမြှင့်သည့်အခါဖုန်းတတီတီဆက်၍ အိမ်စောစောပြန်ရန်ခေါ်ခြင်း၊ညဉ့်နက် ပြန်လာချင်သည့်အချိန်တွင် လာသည့်အခါတွင်လည်းအိမ်တံခါးမဖွင့်ပေးပဲနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာအသံတိတ် ဆန္ဒပြခြင်းညလယ်စာမကျွေးခြင်းများကို အထူးတားမြစ်ပါသည်။ ထိုကိစ္စရပ်များကိုနားဖာကလော်သည့် သံတုတ်လက်နက်ကိုင်၍ အကြမ်းဖက်ချေမှုန်းသင့်လျှင်
ချေမှုန်းမည်။ ထို့ပြင် အိမ်ပြန်နောက်ကျသည့်အခါများတွင်အိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းတွင်ထိုင်၍သော်လည်းကောင်း၊ အိပ်ငိုက်၍သော်လည်း
ကောင်းကျွန်တော့်အားစောင့်နေရန်မလိုပါ။ ထမင်းစားခန်းထဲတွင် ညလယ်စာပြင်၍ထမင်းပူပူအား ယပ်ခတ်ပေးရင်းစောင့်နေရင် လက်ခံပါမည်။
ခြောက်အချက် - ကလေးချစ်တတ်ရပါမည်။ ကျွန်တော့်မျိုးဆက်သစ်များဖြင့် လက်မခံပဲအိမ်နီးနားချင်းများ၏ ကလေးငယ်များကိုအိမ်သို့တစ်ရက်သုံးခေါက်ခေါ်ဆောင်လာနိုင်စွမ်းရှိရမယ်။
ခုနှစ်အချက် - ကျွန်တော်ဆေးလိပ်သောက်လျှင်လည်း အနားတွင်နေ၍နှာခေါင်းရှုံ့ပွရှုံ့ပွလုပ်ပြခြင်း၊ လက်ဖြင့် အငွေ့များကိုခပ်ကာ
မျက်နှာကိုရှုံ့မဲ့ထားခြင်းများ မလုပ်ရပါ။ ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းဝေးရာသို့အေးအေးလူလူ လမ်းလျှောက်ထွက်ခွာခွင့်ပြုသည်။ ဆရာဝန်သုံးသည့်နှာခေါင်းအုပ်သည့် မျက်နှာဖုံးများလည်း အလိုရှိသလောက်ဝယ်ထားခွင့်ပြုမည်။
ရှစ်အချက် - ကျွန်တော့်အဖေနှင့် အမေကို သူ၏ အဖေ အမေအရင်းကဲ့သို့သဘောထားရပါမည်။ ကျွန်တော်က သူ့အဖေအမေကို ယောက္ခထီး၊ယောက္ခမ အနေဖြင့် ရိုသေလေးစားပါမည်။
ကိုးအချက် - အလုပ်မှအိမ်ပြန်ရောက်သည့်အခါ ကော်လာကို စစ်ဆေးခြင်း၊မိန်းကလေးရေမွှေးနံ့ရမရ အယ်ဇေးရှင်းကဲ့သို့ အနံ့ခံခြင်းအား ကန့်ကွက်သည်။ထိုအရာများအစား သနပ်ခါးလူးထားသော ပါးပြင်နှစ်ဘက်ဖြင့်အာပွားရှလူးပေးကာ နွေးထွေးစွာကြိုဆိုရမည်။ (ဟေး..ဟေး…ငါကွ)
တစ်ဆယ်အချက် - ပိုက်ဆံရှာရသမျှကို ကျွန်တော့်မိဘအားလစဉ်ထောက်ပံ့၍ကျန်သည့်ပိုက်ဆံအား အကုန်အပ်ချင်သည့်အခါတွင် အပ်မည်။တစ်ခါတစ်လေတွင် ရန်ဘုံးငွေထား၍ ဒိုရှိင် သုံးစရာရှိသည့်အရာများကိုကပ်ဒိုးလေးအသုံးချမည်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအချက်အနေနှင့် မယားဝတ်တရားငါးပါး၊ကောင်းခြင်းအင်္ဂါမှန်သမျှနှင့် ပြည့်စုံကုံလုံစရာမလိုအပ်ပါ။ တစ်ပါးနှစ်ပါး
ချို့ယွင်းနေလျှင်လည်း သဘောထားကြီးစွာဖြင့် ခွင့်လွှတ်မည်ဖြစ်သည်။
အထက်ပါအချက်များအပြင် ကျွန်တော်အခါအားလျှော်စွာ ထပ်မံဖြည့်စွက်သည့်အချက်များကို ခံတန်တန်မလုပ်ပဲ လိုက်နာနိုင်သည့်သူဖြစ်ရမည်။
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Wednesday, January 28, 2009 in ကျွန်တော့်အကြောင်း
သူသည် ကလေးဘဝက ပန်းချီဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ့ဘဝသည် ကောက်ကြောင်းများ၊ ရောင်စုံခဲတံများ၊ စာရွက်အလွတ်များ၊ ကျောင်းက စာရေးစားပွဲခုံများ၊ အိမ်ကနံရံများ ပေါ်တွင် သူ့၏ လက်ရာများကိုမြင်တွေ့နိုင်၏။
သူသည် ငယ်စဉ်ကတည်းက ဂီတသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ပွဲဈေးတန်းမှ အဘွားဝယ်ပေးသော ကလေးဂစ်တာလေးကိုကိုင်ကာ ရုပ်မြင်သံကြားမှလာသော သီချင်းများအတိုင်းရပ်ကွက်ကို သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ဘူးသည်။
ရလာဒ်အဖြစ် အဘွားသည် သူ့မြေးအတွက် ဂစ်တာအသေးလေးတစ်လက် စပါယ်ရှယ် အော်ဒါမှာပေးခဲ့သည်။ ထိုဂစ်တာလေးရတုန်းက သူ့မှာ ပျော်မဆုံး မော်မဆုံးပေါ့။
သူသည် ကလေးဘဝက သိုင်းဆရာလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးသည်။ မှောင်ရီမိုးချုပ် ဘောလုံးကွင်းထဲတွင် ရွယ်တူများနှင့် သိုင်းရူး ရူးခဲ့ဘူးသည်။
ထို့နောက်တွင်တော့ ဘောလုံးပိုးဝင်ကာ ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြန်သည်။ ကျောင်းတွင်ကန်သည်၊ ရပ်ကွက်ထဲတွင်ကန်သည်။ နေရာစုံတွင်လိုက်ကန်သည်။ နဖူးကွဲ၊ ဒူးပြဲ...ရန်ပွဲများ...
သူသည် ရေမှာပျော်သော ဒင်ကျီးငှက်တစ်ကောင်လည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ခြားနိုင်ငံများသို့သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။ မုဆိုးစိုင်သင်ရင်း အမဲလိုက်အက ပြိုင်ပွဲများ၏ အထာကိုလည်း သဘောပေါက်လာခဲ့သည်။
ရာသီတွေ နာရီတွေနှင့်အတူ သူ့ခံယူချက်များ စိတ်ထားများလည်း ပြောင်းလဲလာသည်။
အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝတွင် သူသည် အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ချင်ခဲ့သည်။ သို့သော် တစ်နှစ်တာသင်တန်းတက်ကာ သူသည် ပင်လယ်ပျော် စင်ရော်တစ်ကောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
တစ်ဖန်သူသည် မြေဓာတ်၏ ဆွဲငင်အားကြောင့် ကုန်းပေါ်တွင် ကုန်သွယ်ရေးပညာသင်ယူခဲ့ပြန်သည်။
ထို့နောက်တွင်တော့ မိမိ၏လွတ်လပ်ခွင့်ကို လက်မှတ်တစ်ခုနှင့် ၃ နှစ်တာလဲလှယ်ခဲ့ပြန်သည်။
ယခုအချိ်န်တွင် သူအဖြစ်ချင်ဆုံးသောဆန္ဒမှာ အိပ်မက်ဖြစ်နေလေသည်။ သို့သော် ဖြစ်ချင်ရာမဖြစ်သည့်လောကထဲတွင် မျှော်လင့်ချက်ဆိုသည်မှာလည်း ပင်ပင်ပန်းပန်းရှိလှသည်။ ထို့ကြောင့်အိပ်မက်များအား သူလွှတ်ချထားခဲ့သည်မှာ ဖုန်များပင် အလိမ်းလိမ်းတက်နေလေပြီ။ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ဖုတ်ဖက်ခါကာ ထိုအိပ်မက်များကို သူတစ်ခုချင်းလိုက်ဝတ်ကြည့်နေမိသည်။ နောက်ထပ် အိပ်မက်င်္အင်္ကျီင်္င်္ ဘယ်နှစ်စုံလောက်လဲဝတ်ရဦးမည်လည်း သူမသိသေး။
ထိုသူ့၏ အိပ်မက်များမှာ ကျွန်တော့်၏ အိပ်မက်များပင်ဖြစ်လေသည်။
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Tuesday, January 27, 2009 in စေတနာနဲ့ပါ
blog မှာ post တင်မယ်ဆိုရင်
ခါတိုင်း ဘလော့ဂ်မှာ ပို့စ် အသစ်တင်တော့မယ်ဆိုရင် blog ကနေမှ login လုပ်ပြီး post တင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကော်နက်ရှင် နှေးတဲ့ နေ့တွေဆိုရင် အရမ်း စိတ်ညစ်ရပါတယ်။ ပို့စ်အသစ်တင်ချင်ပါတယ်ဆို အဲဒီ page က တော်တော်နဲ့ တက်မလာဘူး။ ဒါနဲ့ တစ်နေ့က google မှာ သွားမွှေကြည့်တော့ နောက် URL တစ်ခုကို ညွှန်းထားပါတယ်။ အဲဒီကနေ ၀င်ရင် တော်တော်မြန်တာကို တွေ့ရတယ်။
ဒီနေရာကနေဝင်ကြည့်ပါ အခုတော့ လိပ်network ပက်ကျိnetwork ကနေလည်း ပို့စ်တင်ရတာ စိတ်မညစ်ရတော့ဘူးပေါ့။အဓိက ကတော့မြန်မာပြည်ကbloggerများအတွက်ပါ။အသုံးပြုပြီးကျေနပ်ကြမယ်
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Tuesday, January 27, 2009 in ကြော်ငြာလေးတွေ
ချစ်ခင်ရပါသောသူငယ်ချင်းအပေါင်းတို့အတွက်အဝေး(စင်္ကာပူ-ရုရုား)မှာရောက်နေတဲ့သူငယ်ချင်း-ဆွေမျိုး-မိသားစု-များကိုဆက်သွယ်နိုင်စေဖို့အလိုဌာ ကျွန်တော်ဒီ website လေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်။ပျော်ရွှင်နိင်ကြပါစေ။
စင်္ကာပူမှာရှိတဲ့ မိမိရဲ့ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေရဲ့ ဖုန်းဆီကို SMS ပို့ချင်ရင်တော့ ဒီ Website လေးက တစ်ဆင့် ပို့နိုင်ပါတယ်။ Register လုပ်စရာမလိုသလို အသုံးပြုရတာလည်း လွယ်ကူပါတယ်။ နောက်ပြီး တစ်ဖက်က Reply ကိုလည်းပြန်လက်ခံလို့ရပါသေးတယ်။
လိပ်စာကတော့ ဒီနေရာ မှာပါ။
ဒါကတော့ ရုရှား(မော်စကို)နိုင်ငံကို SMS ပို့လို့ရတဲ့ Website ပါ။ ဒါလည်း Register လုပ်စရာမလိုပါဘူး။
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Monday, January 26, 2009 in ကြော်ငြာလေးတွေ
သူလည်းbloggerတစ်ယောက်ပါပဲ။သိပ်မကြာသေးခင်ကမှblogလောကထဲကိုဝင်လာတဲ့2009 ရဲ့new blogger
တစ်ယောက်ပါပဲ။သူ့ထင်မြင်ချက်တွေသူသိထားတာလေးတွေကိုမျှဝေပေးနေသူလေးပါ။ Blog Titleနာမည်ကတော့
မေဒီ ပါ။မေဒီ ဘလောက်လေးကို ဒီနေရာ မှာသွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အခုတလောနားထောင်ရင်းနားထောင်ရင်းနဲ့ကြိုက်မိသွားတဲ့သီချင်းလေးပါ...အခွေလား?..End Date လေးပါ။ ထွက်ခဲ့တာတော့ကြာပါပြီ။သယ်ရင်းတို့နားထောင်မယ်ဆိုရင်တော့connectionလေးတော့ကောင်းမှရမယ်နော်။
မဟုတ်ရင်တော့ ထစ် ထစ် ထစ် နေလို့။
အာကာသထဲက အသံတွေ၊ ဂြိုလ်တွေသွားလာလည်ပတ်နေတဲ့ အသံတွေ၊ အာကာယဉ်တွေရဲ့ အသံတွေကို နားထောင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဆိုဒ် လေးကိုသာ သွားလိုက်ပါ။ အမေရိကန်အာကာသအေဂျင်စီ (NASA)က ထူးခြားတဲ့အသံတွေကို နားထောင်ဖို့အတွက် ဖန်တီးပေးထားတဲ့ ၀က်ဆိုဒ်လေးပါ။ ၀က်ဆိုဒ်ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ အာကာသယဉ် တစ်စီးထွက်ခါနီး စက်သံတွေ ရေဒီယိုဆက်သွယ်မှု အသံတွေကို ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ spacesounds.com ထဲမှာ သိပံရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ တွေ့ရတဲ့ တွက်နက်ကြီး Bloackhole ရဲ့အသံ၊ စနေဂြိုလ်ရဲ့ခါးပတ်ကွင်း Rings of Saturn ရဲ့အသံ၊ အာကာသထဲကို ပထမဆုံးရောက်ရှိခဲ့တဲ့ ရုရှားအာကာသယဉ် sputnik ရဲ့အသံ၊ နေမင်းရဲ့ နှလုံးခုံသံစတဲ့ အာကာသအစွန်အဖျားက ထူးဆန်းတဲ့ အသံတွေကိုလည်း နားထောင်လို့ရပါတယ်။ ဂြိုလ်တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုတွေ၊ အကာသယဉ်တွေရဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေကို စုံလင်စွာဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ တော်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ related links တွေဖြစ်တဲ့ whalesounds.com မှာ ဝေလငါးတွေရဲ့ စကားပြောသံ၊ လေချွန်သံ၊ dinosounds.com မှာ နှစ်သန်းပေါင်းများစွာက ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ ဒိုင်နိုဆောအမျိုးမျိုးတို့ရဲ့ ဟိန်းဟောက်သံ၊ အသက်ရှုသံ တွေ၊ နောက်ထပ် link တစ်ခုဖြစ်တဲ့ stormsounds.com မှာတော့ တော်နေဒိုး၊ ဟာရီကိန်း၊ လေဆင်းနှာမောင်း တွေစတဲ့ မုန်တိုင်းစုံရဲ့ အသံတွေကို တစ်စုတစည်းထဲ နားထောင်လို့ရအောင် ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ သယ်ရင်း တို့ ကြိုက်နှစ်သက် ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
အင်တာနက်ပေါ်က Movies တွေကိုဘယ်လို Download လုပ်ကြမလဲ..
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Saturday, January 24, 2009 in စေတနာနဲ့ပါ
အင်္ဂလိပ်ရုပ်ရှင်တွေကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလို့ရတဲ့ watchnewfilms၊ joox.net၊ တရုတ်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ၊ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို ကြည့်ရှလို့ရတဲ့ crunchyroll website တို့လိုနေရာမျိုးကနေ connection မကောင်းလို့ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေပါသလား။ burffering စောင့်နေရပြီ ကျော်မရ၊ နောက်ပြန်ပို့မရနဲ့ စိတ်ညစ်နေလား။ ဒီအခက်အခဲအတွက်တော့ movies တွေကို Download လုပ်ပြီးတော့ အဆင်ပြေပြေ ကြည့်လို့ရပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီနည်းလမ်းလေးက ကျွန်တော်တို့အားလုံး သိနေပြီးတော့ သတိမမူမိတဲ့ နည်းလမ်းလေးပါ။ တစ်ချို့လူတွေလည်း သိပြီးသားဖြစ်နေကြမှာပါ။ Download လုပ်မဲ့နည်းလမ်းလေးကတော့ Internet Download Manager software တော့ ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မရှိဘူးဆိုရင်လည်း အင်တာနက်မှာ ရှာလိုက်ပါ။ creck နဲ့ keygen တော့လိုပါတယ်။ movies တွေကို Download ချဖို့အတွက်တော့-IDM ကို open လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Options ဆိ်ုတာကို ၀င်လိုက်ပါ။-ပြီးရင်တော့ File types ဆိုတာကို ရှာလိုက်ပါ။ Automatically Start Downloading the following file types ဆိုတဲ့ Box ထဲမှာ IDM Download လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ file types တွေရေးထားတာ တွေ့ရမှာပါ။ အဲဒီအထဲမှာ DIVX FLV ဆိုတဲ့ file type နှစ်ခုကို ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် OK ပေးလိုက်ပါ။-ပြီးရင် General ထဲက Integrate IDM into Browsers ဆိုတဲ့ အောက်မှာ IE နဲ့ Mozilla firefox ကို click လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင် အဆင်ပြေပြေနဲ့ အလွယ်တကူ Download လုပ်လို့ရပါပြီ။-(watchnewfilms,joox.net တို့က movies တွေကို divx formet နဲ့ တင်ပေးထားတာ ဖြစ်လို့ IDM မှာ DIVX extension ထည့်ပေးလိုက်တာပါ။အဲဒီအတွက် divx formet နဲ့တင်ထားတဲ့ ဘယ် website မဆို Download လုပ်လို့ရပါတယ်။)-(FLV format ကတော့ flash movie type ဖြစ်ပြီး google vide0,youtube နဲ့ crunchyroll စတဲ့ website တွေမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။ IDM မှာ FLV extention ထည့်ပေးလိုက်တာနဲ့ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ website တွေ အပြင်၊ Blog တွေမှာ flash player တွေနဲ့ တင်ထားတဲ့ mp3 သီချင်းတွေကိုလည်း အလွယ်တကူ Download လုပ်လို့ရပါတယ်။ FLV file type တွေကို other formet ပြောင်းပြီး ကြည့်ရှနှိုင်သလို jet audio7နဲ့လည်း အလွယ်တကူကြည့်လို့ရပါတယ်။)-youtube video တွေကိုတော့ ကျွန်တော်က http://www.youtubex.com/ ကနေ တဆင့် Download ချပါတယ်။-window media palyer နဲ့ တင်ထားတဲ့ video/audio file တွေကတော့ httpး\_\_ကိုမသုံးပဲ mms protocol ကိုအသုံးပြုပြီး playlist ကို .asx ဖိုင်နဲ့ ရေထားပြီး source video တွေကို mms support ဆာဗာမှာ သွားတင်ထားပါ။ Download လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ page source code ကိုဖွင့်ပြီး အရင်ဆုံး .asx နဲ့ ဆုံးတဲ့ file အကို Download လုပ်ပါ။ ပြီးရင် page source code ကိုထပ်ဖွင့်ပြီး mms:\_\_ နဲ့ စတဲ့ main file တွေကို Download လုပ်လို့ရပါတယ်။-real player format နဲ့ တင်ထားတဲ့ website တွေကတော့ rtsp:\_\_ protocol သုံးပြီးတော့ သူ့ကို Download လုပ်ဖို့အတွက် Flashget software ကိုအသုံးပြုဖို့လိုပါတယ်။ အရင်ဆုံး ရိုးရိုး download လုပ်လိုက်ပါ။ .ram file ရလာပါတယ်။ notepad ထဲထည့်ပြီး ဖွင့်လိုက်ပါ။ rtsp:\_\_ နဲ့ စတဲ့ link ကို Flashget ထဲ ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ အလွယ်တကူ Download လုပ်လို့ရပါလိမ့်မယ်။ကဲ.. သယ်ရင်းတို့ရေ..good တယ်ထင်ရင် down သာ down လိုက်....
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Saturday, January 24, 2009 in ချစ်သူဖတ်ဖို့
မြွေမြွေချင်းဆိုတော့ ခြေမြင်တာပေါ့။ သူတို့ကလည်း ကျမရင်ထဲက မောင်ရဲ့
ရည်မှန်းချက်ကို အကောင်အထည်ဖေါ်ဖို့ မောင်...လာတတ်တဲ့ လမ်းကလေးကနေ မောင့်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မောင့်ကို ကျမချစ်နေကြောင်း မောင်သိအောင် ဖွင့်ပြောရမယ်။
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Friday, January 23, 2009 in ကြော်ငြာလေးတွေ
အနဂ္ဂ+ဘာဘူ - ရဲ့-လုပ်တာမဟုတ်၊မဟုတ်တာလုပ် ဆိုတဲ့ခွေအသစ်ထွက်နေပြီနော်..(SideA/B)ပါတယ်။လုပ်တာမဟုတ်၊
၀၁ လုပ်တာမဟုတ် ၊ မဟုတ်တာလုပ်
၀၃ အထင်လွဲပြဇာတ်ffeat : ThanThar Win
၀၄ စိတ်မဆိုးနဲ့ 
၀၅ ဘာလုပ်ကြမှာလဲ feat : Ei Si Kwe
၀၆ ဘယ်ကလဲ..ဘယ်သူနဲ့ လဲ feat : Zarni, 4Thee
၀၇ ပုံစံကမချိုးအပြေ feat : J-Me
၁၀ ငါနဲ့ ပဲနေ
၁၁ ဘ၀ဇာတ်ခုံ Hk feat : anegga
၁၂ မိန်းစပွန်ဆာ (main sponsor)
၀၁ မင်းနဲ့ ပြတ်ရင်
၀၂ တွေ့ မယ်..သတိထား
၀၄ ချစ်လို့ ပါ
၁၁ လုပ်တာမဟုတ် ၊ မဟုတ်တာလုပ်
သေးပါဘူး။အခုလောလောဆယ်TAPE & CDပဲလာသေးတယ်။ဝယ်ပြီးနားဆင်ကြပါလို့(ကြော်ငြာဝင်ခြင်း)ဟဲဟဲ။အကယ်၍
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Friday, January 23, 2009 in စေတနာနဲ့ပါ
စကားလုံးတွေဟာ အတော်လေးတွေးလို့ကောင်းတာကြောင့် ဘာသာပြန်ပြီး အားလုံးကို မျှဝေ
ကျွန်တော်တို့နဲ့ မသင့်လျော်တဲ့ လူတွေ အများကြီးကို တွေ့ပြီးမှထိုက်သင့်တဲ့လူနဲ့ တွေ့ဆုံခွင့် ရကြတယ်။ ဒါမှ ကျနော်တို့ ထိုက်သင့်တဲ့ လူနဲ့တွေ့ခွင့်ရလို့ဒီအခွင့်အရေးကို တန်ဖိုးထားနိုင်မယ်။ပျော်ရွှင်မှု တံခါးပေါက် ပိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲ နောကတံခါး တစ်ပေါက်ပွင့်လာတယ်။ဒါပေမယ့် အချိန် တော်တော်များများမှာ ပိတ်သွားတဲ့ တံခါးကိုငေးမှိုင်ထိုင်တွေး နေတာနဲ့ပဲကျနော်တို့အတွက် ပွင့်လာတဲ့ နောက်တံခါးကိုသတိမမူလိုက်မိတော့ဘူး။အကောင်းဆုံး သူငယ်ချင်း ဆိုတာ ...ထိုင်ခုံလေးပေါ်မှာ အတူထိုင်ရင်း ဘာစကားမှ မပြောလိုက်ရဘဲ ငေးမောပြီးခွဲခွာသွားကြပေမယ့် ရင်ထဲမှာ တူမတူနိုင်တဲ့စကားလုံးတွေကိန်းအောင်းသွားစေတာသူငယ်ချင်းကောင်းပါ။
ကျနော်တို့ မဆုံးရှုံးမချင်း ဘာတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားသလဲ ဆိုတာ ကျနော်တို့သတိမထားမိကြဘူး။ အဲဒီအတိုင်းပဲ။ ကျနော်တို့ဆီ ပစ္စည်းတချို့ ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ကျမှ အရင်ကဒါတွေ ဘ၀မှာ လစ်ဟာနေခဲ့ပါလားလို့ သိလိုက်ရတယ်။တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ပြဿနာတက်ဖို့မိနစ်ပိုင်းပဲလိုတယ်။တစ်ယောက်ယောက်ကိုသဘောကျဖို့ နာရီပိုင်းလောက် အချိန်ပေးရမယ်။တစ်ယောက်ယောက်ကို ချစ်ဖို့ဆိုရင် ရက်အနည်းငယ် အချိန်ကြာသွားကောင်း ကြာသွားမယ်။ဒါပေမယ့်လူတစ်ယောက်ယောက်ကို မေ့ပျောက်ပစ်ဖို့တော့ တစ်ဘ၀စာလောက်အချိန်ယူရလိမ့်မယ်။အမြင်အာရုံနောက် မလိုက်ပါနဲ့။ လှည့်ဖျားတတ်တယ်။ ဥစ္စာဓနနောက် မလိုက်နဲ့။ကုန်ဆုံးတဲ့တစ်နေ့တော့ ရှိမှာပဲ။ သင့်ကို ပြုံးအောင် လုပ်နိုင်သူကိုတော့တန်ဖိုးထားစေချင်တယ်။ မှောင်ရိပ်ခိုနေတဲ့ နေ့စွဲတွေကိုထွန်းလင်းပေးနိုင်တာ အပြုံးပဲရှိတယ်လေ။မက်ချင်တဲ့ အိပ်မက်တွေ မက်လိုက်ပါ။သွားချင်တဲ့ နေရာတွေ သွားလိုက်ပါ။ဖြစ်ချင်တာကို ဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်ပါ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့
ကျနော်တို့မှာအသက် တစ်ချောင်းပဲ ရှိတယ်။ လုပ်ချင်တာတွေကို လုပ်ဖို့ အခွင့်အရေးဆိုတာတစ်ခါတည်းပဲ ရတာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ချိုသာတဲ့ လူသား ဖြစ်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ ပျော်ရွှင်မှု ရှိပါစေ။သန်စွမ်းသူဖြစ်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ အခက်အခဲ ရှိပါစေ။ လူသားဆန်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ပူဆွေးမှုတွေရှိပါစေ။ ပျော်ရွှင်သူ ဖြစ်ဖို့ လုံလောက်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေ ရှိပါစေ။သူများရဲ့ နေရာကနေ အမြဲဝင်ကြည့်ကြည့်ပါ။ သင့်ကို နာကျင်အောင် လုပ်မယ့်ခံစားချက်တွေဟာ တခြားသူကိုလည်း နာကျင်စေမှာ မလွဲပါဘူး။သင့် နှလုံးသားကို ပြုံးရွှင်အောင် လုပ်နိုင်သူကို ရှာပါ။ သင့်ရဲ့အိပ်မက်တွေထဲကဆွဲထုတ်ပြီး တကယ့် လက်တွေ့ဘ၀ အဖြစ် ဖန်တီးချင်လောက်အောင်လွမ်းဆွတ်စေခဲ့တဲ့ စက္ကန့်တိုင်းဟာ သင့်ဘ၀ရဲ့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ရတနာတွေပါ။အပျော်ရွှင်ဆုံး လူသားတွေ အတွက် အရာအားလုံး အကောင်းဆုံး ဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ သူတို့ အနီးအနားမှာ ဖြတ်သန်း သွားလာနေတဲ့အရာအားလုံးနီးပါးကိုပဲ တန်ဖိုးထားလိုက်တာပါ။အချစ်ဟာ အပြုံးနဲ့ စတင်တယ်။ အနမ်းကြောင့်ရှင်သန်လာပြီး မျက်ရည်နဲ့ အဆုံးသတ်တယ်။အထွန်းတောက်ဆုံး အနာဂါတ်ဟာ မေ့ပျောက်သွားတဲ့အတိတ်မှာပဲ အမြဲအခြေခံပါတယ်။ အတိတ်က နာကျင်မှုတွေ ဆုံးရှုံးမှုတွေကို ထွက်သွားခွင့်မပေးရင်
တော့ သင်ဟာ ဘ၀ခရီးကို ဘယ်လိုမှ ဆက်လျှောက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။မွေးဖွားလာတုန်းက သင်ဟာငိုနေတယ်။ သင့် ဘေးပတ်လည်က လူတွေ အားလုံးပြုံးနေကြတယ်။ သင် သေသွားပြီ ဆိုရင်တော့ ဒီလိုဖြစ်အောင် အခုကတည်းကနေနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ သေခါနီးအချိန်မှာ သင့်ပတ်လည်က လူတွေအားလုံးငိုနေကြပေမယ့် သင်ဟာ ပြုံးနေနိုင်သူ တစ်ဦးပေါ့။
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Thursday, January 22, 2009 in စေတနာနဲ့ပါ
တခါတုန်းက ဆင်းရဲသားလူငယ်လေး တယောက်ဖြစ်တဲ့ သူရ ဟာ သူ့ ရဲ့ကုန်ပစ္စည်း လေး တွေ ကိုတအိမ်ဝင် တအိမ်ထွက် လိုက်လံလည်ပတ် ရောင်းခြင်းအားဖြင့် သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ သူ့ရဲ့ကျောင်းစရိတ်ကို ကျောင်းပိတ်ရက် မှာရှာဖွေခဲ့ရတယ်။ အဲဒီလို ကျောင်းပိတ်ရက် တွေမှာ လည်ပတ်ရောင်းရင်း သူဟာ မြို့ကလေးတမြို့ ကို အရောက် မှာတော့ သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံလေး တပြားဘဲ ရှိနေခဲ့တယ်။ သူဟာ ဗိုက်အရမ်း ကို စာလောင်လှသော် လည်း ပိုက်ဆံအလုံအလောက် မရှိတာကြောင့် သူ့မှာ အခက်တွေ့ နေခဲ့တယ်။ နောက် တအိမ်ကို သူပစ္စည်း ရောင်းဖို့ အရောက်မှာတော့ သူဟာ ထမင်းတောင်းစားဖို့ ကို ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း အိမ်ပေါက်ဝကို ရောက် တဲ့အခါမှာ တံခါးလာဖွင့်ပေးတဲ့ အမျိုးသမီး ငယ်ကိုကြည့် ပြီး သူဟာ ထမင်းတောင်းစား ဖို့ အစီအစဉ်ပျောက်ကွယ်သွား ခဲ့တယ်။ သူဟာထမင်းအစား ရေတခွက်ကိုသာ တောင်းဆိုလိုက်တယ်။သူမဟာ ကိုသူရ ကို သေသေချာချာ အကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ သူဟာဆာလောင်နေပုံ ရတာကြောင့် ရေအစား နွားနို့ အပြည့် တခွက် ယူလာပြီးပေးလိုက်တယ်။ ကိုသူရ ဟာအမျိုးသမီးယူလာပေးတဲ့ နွားနို့ ကို အေးဆေးစွာသောက်လိုက် ပြီး အမျိုးသမီး ကိုလှမ်းမေးလိုက်တယ်။ “ကျွန်တော် ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဗျ။ ”“ရှင်ဘာတခုမှပေးစရာ မလိုပါဘူး” လို့ သူမ လှမ်းဖြေလိုက်တယ်။ “ကျွန်မ အမေကသင်ပေးထားပါတယ်။ စေတနာနဲ့ ကူညီတာအဖိုးအခ မယူရပါဘူးရှင်”အဲဒီနောက်မှာ လူငယ်လေးဟာ “ကျွန်တော့် ရင်ထဲကနေ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျာ။” လို့ပြောပြီး သူမအိမ်ကနေထွက်လာခဲ့တယ်။ သူမ တိုက်လိုက်တဲ့ နို့တခွက် ဟာလူငယ်လေးဖြစ်တဲ့ ကိုသူရ အတွက်တော့ အားအင်တွေပြန်လည်ပြည့်စုံစေသာမက ကိုသူရ ရင်ထဲမှာ သူစိမ်းတယောက် ရဲ့ကူညီတတ်မှု့တွေကို ကျေးဇူးတင်နေမိတော့တယ်။အဲဒီအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပြီး နှစ်တွေအတန်ကြာတဲ့နောက်မှာတော့ အဲဒီအမျိုးသမီး ဖြစ်သူဟာ အပြင်းအထန် ဖျားပါတော့တယ်။သူမတို့ မြို့ က ဆရာဝန်တွေဟာ အထွေထွေ ကုသတဲ့ သာမန်ဆရာဝန်တွေဖြစ်တာကြောင့် သူမရဲ့ ရောဂါကို ကောင်းမွန်စွာမကုသနိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့် သူမကိုအနီးနားမှာရှိတဲ့ မြို့ကြီးတစ်မြို့ မှာအထူးကုဆရာဝန် တွေနဲ့ ပြသဖို့ သူမကိုလွှတ်လိုက်တယ်။သူမ ရောက်လာတဲ့ ဆေးရုံမှာ တော့ ဒေါက်တာ သူရ ဟာ ဆေးရုံအုပ်ဆရာဝန်အဖြစ် တာဝန်ကြ နေခဲ့ ပါတယ်။ ဒေါက်တာသူရ ဟာ လူနာစာရင်းမှာ လူနာရဲ့ မြို့နာမည်လေးကြားပြီး စိတ်စောစွာနဲ့သူမရှိရာ လူနာဆောင် ကို မပြေးရုံတမယ် အပြေး ကလေးရောက် လာ ခဲ့ ပါတယ်။ သူမအနီးနားရောက်လာတဲ့ အခါမှာ သူမ ကို ချက်ခြင်းဘဲမှတ်မိလိုက်တယ်။ ဒေါက်တာ သူရ ဟာအဲဒီနေ့ မှာ အိမ်မပြန်တော့ပဲ သူမ ရဲ့ သွေးစစ်တန်းစာရွက် တွေကုိ သေချာစွာ စစ်ဆေးပြီး သူမရဲ့ ရောဂါကို ဒေါက်တာ သူရ ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကုသခဲ့တယ်။ ဒေါက်တာသူရ ရဲ့ ကြိုးစားပမ်းစားကုသမှု့ကြောင့် သိပ်မကြာ လှတဲ့ရက် တွေမှာ သူမရဲ့ ရောဂါဟာပျောက်ကင်းခဲ့ရတယ်။ သူမရဲ့ နောက်ဆုံးဆေးရုံ ဆင်းရမယ့် ရက် မှာတော့ ဒေါက်တာသူရဟာ ကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်တဲ့ဌာန မှာ သူမရဲ့ နောက်ဆုံးကုန်ကျငွေ စာရင်း ဖြတ်ပိုင်း ကို သွားယူပြီး စာရင်းဖြတ်ပိုင်းပေါ်ကစာရွက် အလည်တည့်တည့်မှာ တစုံတခုကိုရေးချလိုက်တယ်။ အဲဒီနောက်မှာ ဖြတ်ပိုင်းလေးကို သူမဆီကို ပို့လိုက်တယ်။ သူမ ဟာလူနာ ကုန်ကျငွေ ဖြတ်ပိုင်းကို ဖွင့်မကြည့်ရဲအောင်ပါဘဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီ ကုန်ကျငွေဟာ သူမတသက်လုံးရှာထားသမျှပိုက်ဆံ တွေနဲ့ ပေးဆပ်ရင်တောင် လုံလောက်မယ်လို့တောင် သူမ မထင်ထားလို့ ပါဘဲ။သူမဟာနောက်ဆုံးမှာတော့ စိတ်အားတင်းပြီး ဖြတ် ပိုင်းလေးကို လှန်ကြည့်လိုက်တယ်။ သူမ ဖြတ်ပိုင်း လေး ကိုကြည့်ပြီး သူမမျက်လုံး မှာ တော့ မယုံကြည်နိုင်တဲ့ အရာတွေနဲ့ မျက်ရည်တွေ စီးကျနေပါတယ်။ အဲဒီမျက်ရည်တွေဟာ ပျော်ရွှင်လို့ကျတဲ့မျက်ရည်တွေဖြစ်မှာပါ။ သူမဖြတ်ပိုင်းပေါ်က ဖတ်လိုက်ရတဲ့ စာကတော့“ ဤဖြတ်ပိုင်းအား သန့်စင်သောနွားနို့တခွက်ဖြင့် ရှင်းပြီး ”
တနေ့သ၌ ကျီးတစ်ကောင် သည် သစ်ပင်မြင့်ကြီး တစ်ပင်၏ အကိုင်း တစ်ခုတွင် သစ်ကိုင်းပေါ်တွင် တစ်နေကုန် ဘာမှ မလုပ်ပဲ အေးချမ်းစွာ နားနေလေသည်။ ထိုအခိုက် တောအုပ်ထဲ မှ ယုန်တစ်ကောင် ထွက်လာပြီး အေးချမ်းစွာထိုင်နေသည့် ကျီးကို မြင်လေ၏။ယုန်က ထိုင်နေသည့် ကျီးကို လွန်စွာအားကျလှသဖြင့် ... "အဆွေကျီး... ကျွန်ုပ်မှာ တစ်နေကုန် ပြေးလွှား ရုန်းကန် နေရပါသည်။ ကျွန်ုပ်လည်း အသင်ကဲ့သို့ အေးချမ်းစွာ ထိုင်နေ လို့ ရမည်လော" ဟုမေးလေ၏။ကျီးက "အင်း" ဟု တိုတိုတုတ်တုတ် ဖြေလိုက်၏။ ထို့နောက် ယုန်လည်း မြေပြင်ပေါ်တွင် ထိုင်နေလိုက်လေ၏။ များမကြာမီ ၀ံပုလွေတစ်ကောင်ထွက်လာပြီး ထိုင်နေသည့် ယုန်ကို ကိုက်စားလိုက်လေသည်။
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Thursday, January 22, 2009 in GTalk အကြောင်းသိကောင်းစရာ
တစ်ခုခု သိချင်တယ် ဆိုရင် Google မှာ ရှာလိုက်ပေါ့ လို့ပြောကြပါတယ်။ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် မှာတတ်တဲ့သူငယ်ချင်း မိန်းကလေး တစ်ယောက် ဆို Google က ဘာရိုက်ရိုက် အကုန်သိလွန်းလို့ သူ့ကိုများ သိနေမလား မသိဘူး ဆိုပြီး သူ့နာမည်သူ ရိုက်ထည့် ပြီး ရှာကြည့်ပါသတဲ့။ မတွေ့ပါဘူးတဲ့။ အဲဒီတုန်းကတော့ ပြန်ပြောပြီး ရယ်ကြ ရတာပေါ့။ အခုခေတ်မှာတော့ တကယ် ရှာလို့ရပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အချက်အလက်တွေက အင်တာနက်တနေရာရာမှာ ရှိနေရင်တို့၊ Blog ရေးရင်တို့၊ friendster တို့ facebook တို့ သုံးယင်တို့၊ ဆိုရင်လည်း လူနာမည် ကို Google မှာ ရှာရင် ပေါ်လာမှာပါပဲ။ ဘာပဲပြောပြော Google က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀ထဲကို မသိမသာနဲ့ ၀င်ရောက်နေပါပြီ။အခု Google က ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတာအကုန် ရှာလို့ရယုံတင် ရပ်မနေပါဘူး။ အခုဆို စကြ၀ဠာ အထိကို မွှေနှောက် ကြည့်ရှုနိုင် အောင်လုပ်လိုက်ပါပြီ။ ကြယ်စု ပေါင်း သန်း တစ်ရာခန့်၊ ဂလက်ဆီပေါင်း သန်း နှစ်ရာခန့် ကို Google Earth ထဲက ကောင်းကင်ပြင် ကြီးပေါ်မှာ မျက်ဝါးထင်ထင် ကြည့်ရှု ရင်း ခံစားမှု အသစ်တစ်မျိုးကို ခံစားရစေ မှာဖြစ်ပါတယ် တဲ့။ အဲဒါကို NASA နှင့်ပူးပေါင်းပြီး တည်ဆောက်ထား ပါတယ်တဲ့။ ကြည့်ချင်ရင်တော့ Google Earth ရှိပြီးသူများ Help>Check for Update Onlines လုပ်ရမယ်။ မရှိသေးရင်လည်း http://earth.google.com/sky/skyedu.html မှာ Download လုပ်ရမယ်။
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Thursday, January 22, 2009 in ဇာနည်ကြိုက်တာဒါလေးတွေ
မင်းသိင်္ခရေးဖူးတဲ့ ဟိန္ဒူပုံပြင်လေး တစ်ပုဒ် ပြောပြမယ်။ တစ်ခါက နာရာဒ ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက် ရှိတယ်ဆိုပဲ၊ အဲဒီလူဟာ ကောင်းကင်ဘုံက ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ စကားပြောလို့ရတယ်တဲ့။ တစ်နေ့မှာ နာရာဒဟာ တောအုပ်ကြီး တစ်ခုအတွင်းကို ဖြတ်ဝင်သွားတယ်။ သစ်ပင်တစ်ပင် အောက်မှာ ယောဂီကြီးတစ်ဦး ထိုင်နေတာကို တွေ့ရတယ်၊ သူ့ရဲ့ အကျင့်က ထိုင်ပြီးကျင့်ရတဲ့ အကျင့်ဖြစ်တယ်၊ အဲဒီယောဂီကြီးကို နာရာဒက "ဒီနေ့ ကောင်းကင်ဘုံက ပဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ တွေ့ဖို့ရှိတယ်၊ ဘာမှာ အုံးမလဲ" လို့ မေးလိုက်တယ်။ အဲဒီတော့ ယောဂီကြီးက "ကျုပ်ဒီလို ထိုင်ပြီးကျင့်နေတာ အနှစ်လေးဆယ်ရှိပြီ၊ ဘယ်တော့ ကောင်းကင်ဘုံ တံခါးကို ဖွင့်ပေးမလဲ လို့ မေးလိုက်စမ်းပါ" လို့ ပြန်ပြီးပြောတယ်၊ အဲဒီမှာ နာရာဒက "ကောင်းပြီလေ၊ မေးပေးပါမယ်" ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်၊ တောနက်ထဲရောက်တော့ ကောင်းကင်ကို မော့ပြီး ယောဂီကြီး မေးတဲ့စကားကို ကောင်းကင်ဘုံက ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကို မေးပေးတယ်။ အဲဒီမှာ ကောင်းကင်ဘုံက အသံတစ်သံကြားရတယ်။ "အဲဒီယောဂီထိုင်နေတဲ့ သစ်ပင်မှာရှိတဲ့ သစ်ရွက် အရေအတွက်ဟာ သူဖြည့်ကျင့်ဖို့ ကျန်တဲ့ ဘ၀အရေအတွက်ပဲ" လို့ပြန်ပြီးဖြေတယ်။ အဲဒီအဖြေကို နာရာဒက ယောဂီကြီးထံ ပြန်လာပြီး ပြောပြတယ်၊ အဲဒီမှာ ယောဂီကြီးက အတော်ကို ဒေါပွသွားတယ်၊ အခုလုပ်လာတာလည်း အနှစ်လေးဆယ်ရှိပြီ၊ ဒါကလည်း မပြီးသေးဘူး၊ နောက်လုပ်ရမည့်ဟာတွေကလည်း နှစ်တွေမဟုတ်ဘူး၊ ဘ၀တွေတဲ့၊ သစ်ရွက် အရေအတွက်လောက်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ သစ်ရွက်အရေအတွက်ကလည်း မနည်းဘူး၊ သစ်ပင်ကလည်း မကျည်းပင်၊ မလုပ်တော့ဘူး၊ ပြန်မယ် ဆိုပြီး ထပြီးပြန်သွားတယ်။အဲဒီအခါမှာ နာရာဒဟာ ရှေ့ဆက်ပြီး လျှောက်သွားတော့ သစ်ပင် တစ်ပင် အောက်မှာ ယောဂီလူငယ်တစ်ယောက် ခုန်နေတာကို တွေ့ရတယ်၊ အဲဒီယောဂီလေးကို နာရာဒက ကောင်းကင်ကို ဘာမှာချင်သေးလဲ။ သူဒီနေ့ ကောင်းကင်ဘုံက ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ စကားပြောစရာရှိတယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒီယောဂီလေး ကျင့်နေတဲ့ကျင့်စဉ်က ခုန်ပြီးကျင့်တဲ့ ကျင့်စဉ်လိုတယ်၊ ယောဂီလေးက "ကျုပ်ကတော့ ကျင့်နေတာပါပဲ၊ ကောင်းကင်ကို မေးပေးစေချင်တာကတော့ နောက်ထပ် ဘယ်လောက် ခုန်ရအုံးမှာလဲ" လို့ပြန်ပြီး ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒီအခါမှာ နာရာဒက တောထဲကို ၀င်သွားတယ်၊ ကောင်းကင်ကို မော့ပြီးတော့ ယောဂီလေးအတွက် မေးပေးပြန်တယ်၊ ကောင်းကင်ဘုံကလည်း ပြန်ပြီးဖြေတယ်၊ "ဒီတောထဲမှာရှိတဲ့ မကျည်းပင် တွေမှာရှိတဲ့ မကျည်းရွက်ကလေးတစ်ရွက်ဟာ ဘ၀တစ်ခုပါ။ အဲဒီဘ၀တွေလောက် ခုန်ပြီးရင် တံခါးဖွင့်ပေးမယ်" လို့ပြန်ပြီးပြောတယ်၊ အဲဒီတော့ နာရာဒဟာ ယောဂီလေးဆီပြန်လာပြီး အဲဒီအတိုင်း ပြန်ပြောတယ်၊ ယောဂီလေးဟာ နာရာဒရဲ့ စကားကို ကြားတာနဲ့ အတော်ကို ပျော်သွားတယ်၊ ပြီးတော့ ... "ကော်တာပဲ၊ အရင်တုံးက ဘယ်လောက် လုပ်ရမှန်းမသိပဲ လုပ်နေရတာ၊ အခုတော့ အရေအတွက် သိရပြီ။ ဒီအချက်ဟာ အားရှိစရာ ကောင်းတဲ့ အချက်ပဲ၊ ဆက်ပြီးခုန်မယ်" လို့ပြောပြီး ပေါ့ပါးသွက်လက်တဲ့ စိတ်နဲ့ ခုန်လိုက်တယ်၊ အဲဒီအခါမှာပဲ ကောင်းကင်ဘုံက ကောင်းချီးပေးသံကြားရတော့တယ်၊ တံခါးဖွင့်လိုက်ပါပြီတဲ့။ ဒီအချက်ကို ကြည့်ရင်ယောဂီအိုကြီးဟာ အတော့်ကို အကြောင့်အကျ များတယ်၊ ဘယ်လောက်လုပ်ပြီးပြီ။ ဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲ။ အဲဒီလောက်အများကြီးဆို ခက်တော့တာပဲ၊ ဘာညာပေါ့။ ယောဂီလူငယ်လေးကတော့ အကြောင့်အကျနည်းတယ်။ အရေအတွက် ကို မေးမယ့်မေးတာပါ။ သူ့သဘောထားကတော့ မပွင့်မချင်း ခုန်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောထားမျိုးရှိပြီးဟန်တူပါတယ်။ အဲဒီလူမျိုးတွေ အတွက် အရာခပ်သိမ်းဟာ အစဉ်သဖြင့် ပွင့်နေပါတယ်....။
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Tuesday, January 20, 2009 in ကျွန်တော့်အကြောင်း
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Sunday, January 11, 2009 in နည်းပညာများ
လည်းလုပ်လိုက်ရောစက်ကဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးထပြီးပညာပြပါလေရော။နှေးလိုက်တာမှပြောမနေနဲ့တော့။အဲတာနဲ့ပဲOne clip(tune up)
တဲ့အထဲမှာကျွန်တော့်ရဲ့one clipပါလိုက်ပြီးတော့လေးနေတော့တာပါပဲ။ကြာလိုက်တာမှခါတိုင်းone clipရင်အလွန်ဆုံး၃မိနစ်ပဲကြာတယ်။အခု
ဘယ်လိုပျက်သွားလဲဆိုတော့Control Panelကနေadd or removeကိုသွားကြည့်တော့ESET(NOD32)နဲ့တူတာဆိုလို့အစအနတောင်မရှိပါဘူး။
ကိုသရော်နေတယ်။ ကျွန်တော်လည်းမသင်္ကာံတာနဲ့ Start-All programs ထဲဝင်ကြည့်လိုက်တော့အမ်မယ်ဒီကောင်ကဒီရောက်နေတာကိုးးးးးးးးးးးးး
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Saturday, January 10, 2009 in GTalk အကြောင်းသိကောင်းစရာ
Gmail မှာ Holiday Time! သတ်မှတ်ပေးထားရင် အလိုအလျှောက် စာပြန်ပေးပါတယ်။ ဘာကြောင့် လောလောဆယ် စာမပြန်နိုင်တာ အသိပေးနိုင်တော့ တစ်ဖက်ကလည်း မမျှော်ရတော့ဘူးပေါ့ :-)အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင် မရှိတဲ့ဒေသ တွေဆီသွားမယ်ဆို စသွားမယ့်ရက် နဲ့ ပြန်ရောက်မယ့်ရက် ရွေးပေးပြီး ပြောပြစေလိုတဲ့ စာသားဖြည့်ထားရင် သတ်မှတ်ရက် အတွင်းမှာ Gmail က အ၀င်စာတွေကို စာပြန်ပေးနေပါလိမ့်မယ်။မူရင်း ဂျီမေးလ် မှာ labs icon သို့ setting \_labs \_Holiday Time! မှာ enable လုပ်ပြီး setting save လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ Standard version သုံးနေမှ တွေ့ရပါမယ်။
နောက်တစ်ဆင့်မှာ setting \_general \_Out of Office AutoReply သွားပြီး on mode ကို ရွေးရပါတယ်။ ရက်စွဲ၊ခေါင်းစဉ်၊အကြောင်းအရာ တွေ စိတ်ကြိုက် ချိန်ညှိပြီး contacts က မေးလ်ဘဲ ပြန်စေမလား အ၀င်စာ အားလုံး ပြန်စေမလား ဆုံးဖြတ်ပြီးရင် ခရီးထွက်နိုင်ပါပြီ။ခရီးက ပြန်ရောက်လာရင် အရင်ဆုံး မိမိ မေးလ်ကို ဘယ်သူ ဟက်ထားသေးလည်း စစ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Friday, January 09, 2009 in GTalk အကြောင်းသိကောင်းစရာ
သုံးရလွယ်တယ်... အဆင်ပြေတယ်... ပေါ့တယ်... ဆိုပေမယ့် Gmail မှာ ကန့်သတ်ချက်တွေ ရှိတာကို သင် သတိထားမိရဲ့လား။
ကန့်သတ်ချက် (၁)တစ်ရက်ကို စာ အစောင် ၅၀၀ ပဲ ပို့လို့ရပါတယ်။ (Send ဆိုတဲ့ Button ကို အခေါက် ၅၀၀ ပဲ နှိပ်လို့ ရတဲ့ သဘောပေါ့။)ကန့်သတ်ချက် (၂)စာတစ်စောင်ကို တစ်ခါပို့ရင် လူ အယောက် ၅၀၀ ကိုပဲ ပို့လို့ရတယ်။
ကန့်သတ်ချက် (၃)တစ်ရက်ကို Email ၂၀၀၀ ပဲ ပို့လို့ရပါတယ်။ (စာတစ်စောင်ကို လူ ၅၀၀ ကို ၄ ခေါက်ပို့လို့ရတဲ့ သဘောပါ။)
သင့်အနေနဲ့ စာတစ်စောင်ကို လူ ၅၀၀ ထက် ပိုပို့မိလျှင် သော်လည်းကောင်း၊ *ပေးပို့နိုင်ခြင်းမရှိမှု* (Undeliverable) တွေ အရမ်းများနေလျှင် သော်လည်းကောင်း Google က သင့် Email Account ကို ယာယီပိတ်လိုက် လိမ့်မယ်။
Outlook လို Email Client တွေ သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ စာတစ်စောင်ကို ၁ ကြိမ်မှာ လူ ၁၀၀ ထက် ပိုပို့ လို့မရနိုင်ပြန်ဘူး။
ဒီလို ကန့်သတ်ချက်တွေ အားလုံးဟာ Spam တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ပဲလို့ Google က ပြောပါတယ်။
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Thursday, January 08, 2009 in ကြော်ငြာလေးတွေ
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု(အကယ်ဒမီ)ချီးမြှင့်ခြင်းအခမ်းအနားကို ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း နေပြည်တော်၌ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားသည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု(အကယ်ဒမီ)ပွဲသို့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်များ၊ အတတ်ပညာရှင်များဖြင့် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပနိုင်ရန်စီစဉ်ထားပြီး ပြည်ထောင်စုနေ့တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များကိုလည်း ပြသနိုင်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိသည်ဟု သိရသည်။ အကယ်ဒမီစင်မြင့်တည်ဆောက်ရန်နှင့် မီးအလှဆင်ရေးတင်ဒါများခေါ်ယူခဲ့ရာ ခြောက်ဦးတင်သွင်းခဲ့ပြီး ယင်းတို့အနက် ရွေးချယ်ပြီးဖြစ်ကာ ဇန်နဝါရီဒုတိယပတ်တွင် ကြေညာသွားနိုင်မည်ဟု သိရသည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု(အကယ်ဒမီ)အတွက် မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသစ် ၁၀ ကားရုံတင်ပြသခဲ့ပြီး ယင်းဇာတ်ကားများမှာ ဒါရိုက်တာထွန်းအောင်ဇော်ရိုက်ကူးသည့် 'ငါ့ဓားငါ့သွေးငါ့ဧရာဝတီ' ဇာတ်ကား၊ ဒါရိုက်တာမောင်မျိုးမင်းရိုက်ကူးသည့် 'ကက်ကင်း' ဇာတ်ကား၊ ဒါရိုက်တာဓာတ်ပုံအဏ်ထော်ဏီရိုက်ကူးသည့် 'အမေနှင့်သမီးများ'ဇာတ်ကား၊ ဒါရိုက်တာမီးပွားရိုက်ကူးသည့် 'ကျွန်တော့်ချစ်သူပြောသောသူ့ချစ်သူအကြောင်း' ဇာတ်ကား၊ ဒါရိုက်တာမြို့တော်မောင်ယဉ် အောင်ရိုက်ကူးသည့် 'ကိုးဆယ်ဆသာလိမ့်မယ်' ဇာတ်ကား၊ ဒါရိုက်တာမောင်ဝဏ္ဏရိုက်ကူးသည့် 'ရင်နင့် အောင်မွှေး' ဇာတ်ကား၊ ဒါရိုက်တာသိန်းဟန်(ဖီးနစ်)ရိုက်ကူးသည့် 'ဝင်္ကပါအခြစ်နှင့်သူ၏ချစ်ကိုကိုချစ်'ဇာတ်ကား၊ ဒါရိုက်တာညွန့်မြန်မာညီညီအောင်ရိုက်ကူးသည့် 'မိုးပေါ်ခုန်တက်ကလိုက်ချင်ပါတယ်' ဇာတ်ကား၊ ဒါရိုက်တာကိုအောင်မင်းသိမ်းရိုက်ကူးသည့် 'ဓမ္မာသောကအင်းဝရာဇာ' ဇာတ်ကားတို့ ဖြစ်သည်ဟုသိရသည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုအကယ်ဒမီပွဲအတွက် စင်မြင့်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် မီးအလှဆင်လုပ်ငန်းများကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်းပြုလုပ်သွားရန် စီစဉ်ထားပြီး အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များ တက်ရောက်ရာတွင်လည်း ယခင်နှစ်များကဲ့သို့ပင် တစ်စုတစည်းတည်းသွားနိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှ စီစဉ်သွားမည်ဟု သိရသည်။
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Wednesday, January 07, 2009 in ချစ်သူဖတ်ဖို့
ဒီထက်ဆိုးရွားတဲ့အဖြစ်မျိုးနောက်ထပ်မရှိ နိုင်တော့ပါဘူး။လာစမ်းပါဒုက္ခတွေ ဟားဟား...။မင်းကိုငါသတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာငါဘယ်
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Wednesday, January 07, 2009 in ကြော်ငြာလေးတွေ
Myanmar EBooks (mmblogs.net)
Myanmar Network News (Free EBooks for All Myanmar) My Post
Shwesagar(ရွှေစကား) EBooks (Myanmar Novels)
Free Myanmar Ebooks Sharing (myanmarebooks.net.tc)
Serene Ebook Corner - မျှဝေလိုသောစာအုပ်များ (Parramie)
Myanmar Books - ရှာဖွေလို့ ရသမျှစာအုပ်များ (Phaung Phaung)
Weenyinthit Book Shelf (weenyinthit)
မှတ်ထားတဲ့ website တွေကတော့အများကြီးပါပဲ၊ ဒီနေ့တစ်ခုခြင်း ပြန်ကြည့်လိုက်မှ တချို့ ဆိုဒ်တွေ လုံးဝ မရှိတော့တာ တွေ့ လိုက်ရတယ်။နာမည်ကြီး ချယ်ရီသစ္စာ ဆိုရင်အခု ဘာမှမရှိတော့ပါဘူး..
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Wednesday, January 07, 2009 in စေတနာနဲ့ပါ
ပထမလူ။ ။ `မီးရောင်ဆီရောက်မှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေသေချာချာ ပြန်ကြည့်ရဦးမယ်´
ဒုတိယလူ။ ။ `ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကို အရင်ကြည့်ပစ်လိုက်မယ်ဗျာ´
တတိယလူ။ ။ (အတန်ကြာသည်အထိ တိတ်ဆိတ်နေပြီးမှ) `ကျွန်တော်ကတော့ မီးအိမ်ထွန်းသူကို အရင်ကြည့်မယ်ဗျာ´
`ဟာ...ကြည့်စမ်း၊ ကမ်းပါးစွန်းက သစ်ပင်ကြီးဟာ မိုးထိအောင် မြင့်တက်သွားပါလား´
လေသံ တဟူးဟူးကြားမှာပဲ၊ အဖော်ဖြစ်သူ ပြန်လည်ဖြေကြား၏။
`သစ်ပင်က မြင့်တက်သွားတာ မဟုတ်ဘူး၊ ကျုပ်တို့က ချောက်ထဲကျနေတာဗျ´
ဆရာမလေး လှည့်ထွက်သွား၏။ ကျွန်တော် မဖြေနိုင်သော စာမေးပွဲဖြစ်ပါသည်။ ရိုးသားကျေနပ်စွာ စွန့်လွှတ်ခဲ့သော အောင်မြင်မှုတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေနပ်ပါသည်။
ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရသည့် စာမေးပွဲဖြစ်သည့်တိုင် . . .
ဖြေဆိုသူ ကုလားထိုင်မှာ . . .
ကျွန်တော် ဘုရင်ထိုင် ထိုင်ဖြစ်ခဲ့လေသည်။
`သူ့အိတ်ကပ်ထဲမှာ ငွေအများကြီး ပါပါတယ်´
`အဲဒါကို မသိချင်ဘူး။ သူ့ အိတ်ကပ်ရဲ့ နောက်မှာ ရင်ဘတ်တစ်ခုပါလား´
`ရင်ဘတ်ထဲမှာ နှလုံးသား လှလှတစ်ပွင့် ပါလား´
ဖြေသံ ပြန်မကြားရ၊ မေးသူက ဆက်ပြောလိုက်သည်။
လမင်းကြီးက ကောင်းကင်မှာ ရွှန်းရွှန်းဝင့်ဝင့် သာသည်။
`ကြည့်စမ်း၊ လမင်းကြီးက ဗိုက်ကြီး ဖောင်းလို့´
ခွေးပိန်ကလေးကို ပွေ့ဖက်ကာသူတောင်းစားက ဆက်ပြော၏။
`ဘာမှ အားမငယ်နဲ့ သိလား . . .၊ လမင်းကြီးတောင် တစ်လတစ်ခါပဲ ဗိုက်ဝအောင် စားရတယ်´
ကောင်လေး - ငါတို့ တွေအတွက်တော့ လောကကြီးကအထီးကျန်စရာကောင်းလိုက်တာနော်။
ကောင်မလေး -ဟုတ်တယ်နော်....တစ်ခြားသူငယ်ချင်းတွေမှာချစ်သူတွေကိုယ်စီရနေပြီ....။ တို့ အုပ်စုမှာ တို့ ၂ယောက်ဘဲ
အထီးကျန်ပြီးကျန်ခဲ့တာ...။ ဒီပြင်လူတွေမှာလည်းချစ်သူကိုယ်စီနဲ့ ..။ ငါတို့ဘ၀ကအထီးကျန်လိုက်တာ..။
ကောင်လေး - ငါတော့ဘာလုပ်ရမယ်မှန်းတောင်မသိတော့ပါဘူးကွာ...။
ကောင်မလေး - ဒီလိုလုပ်ပါလား..ငါတို့ game တစ်ခုကစားရအောင်...။
ကောင်လေး - ဘာ game လဲ..။
ကောင်မလေး -ငါနင့်ကောင်မလေးအနေနဲ့ ရက် ၃၀ နေပေးမယ်..နင်လဲငါ့ကောင်လေးအနေနဲ့ပေါ့...ဘယ်လိုလဲ..။
ကောင်လေး - ဒီအကြံမဆိုးဘူး..။နောက်ရက်တွေမှာလဲငါ့မှာဘာမှထူးထူးခြားခြားလုပ်စရာမရှိဘူး...။ သဘောတူတယ်ကွာ..။
ပထမနေ့ -သူတို့ ၂ယောက် အချစ်ရုပ်ရှင်တူတူ သွားကြည့်ပြီးပျော်ရွင်ခဲ့ကြတယ်..။၄ ရက်မြောက်နေ့သူတို့တွေကမ်းခြေကို ပျော်ပွဲစားထွက်ခဲ့ကြတယ်...။သာယာတဲ့အချိန်လေးတစ်ခုသူတို့ ရခဲ့ကြတယ်လေ..။
၁၂ရက်မြောက်နေ့-ကောင်လေးကကောင်မလေးကိုCircusပွဲခေါ်သွားတယ်ဗျ..မြင်းရိုင်းတစ်ကောင်ဖျော်ဖြေတဲ့အလှည့်ကျတော့
ကောင်မလေးကရုတ်တရက်လန့် ပြီးကောင်လေးလက်နဲ့ ..ဘေးကလူကြီးလက်မှားကိုင်မိလို့နှစ်ယောက်လုံး ရယ်ကြရသေးတယ်ဗျ..။
၁၄ရက်မြောက်နေ့ - သူတို့ လျှောက်လည်ရင်းလမ်းဘေးက ဗေဒင်ဟောတဲ့အမယ်အိုကြီးကိုတွေတော့ သူတို့ ရှေ့ရေး ဝင်မေးခဲ့သေးတယ်ဗျ..။
အမယ်အိုကြီးက.."ကလေးတို့ ..ကလေးတို့ရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကို..အလကားဖြုန်းတီးမပစ်မိစေနဲ့
့..နှစ်ယောက်အတူတူချစ်ချစ်ခင်ခင် ပျော်ပျော်ရွင်ရွင်နေကြပါ"....တဲ့..။ အမယ်အိုကြီးရဲ့ မျက်ဝန်းတွေမှာမျက်ရည်တွေစို့
နေတာကိုတော့ ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေးသတိမထားမိလိုက်ဘူးတဲ့..။
ရက် ၂၀မြောက်နေ့ - သာယာတဲ့ညနေခင်းလေးမှာ ကောင်မလေးကကောင်လေးကတောင်ပေါ်အပန်းဖြေစခန်းခေါ်သွားတယ်..။
ရုတ်တရက်..ကြယ်ကြွေသွားတာ သူတို့ တွေ့လိုက်တယ်..။ ကောင်မလေး နှုတ်ကတစ်စုံတစ်ခုကို တိုးတိုးရေရွတ်လိုက်တယ်...။
၂၈ရက်မြောက်နေ့ - သူတို့ နှစ်ယောက် busအတူတူစီးကြတယ်..။တစ်နေရာရာကပြန်လာတာပေါ့ဗျာ..။ သိတဲ့အတိုင်းလမ်းကြမ်း
တော့ကားကခုန်နေတာပေါ့..။ အဲဒီမှာကောင်မလေးကကောင်လေးကိုမတော်တဆနမ်းမိသွားတယ်..။ ပထမအနမ်းပေါ့ဗျာ..။
၂၉ရက်မြောက်နေ့ ည ၁၁နာရီ ၃၇မိနစ်... ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေးနှစ်ယောက် သူတို့ ဒီgame ကို ပထမဆုံး ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ပန်းခြံလေးမျာထိုင်နေကြတယ်..။မနက်ဖြန်ကသူတို့game ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့လေ..။
့ကောင်လေး - ကိုယ်နည်းနည်းပင်ပန်းနေတယ်ကောင်မလေး..။
ကောင်မလေး- ဒါဆို Apple juice ၀ယ်ခဲ့ပေးပါလား..။ thank you နော်..။
ကောင်လေး- ရပါတယ်..။ ကိုယ့်ကိုစောင့်နေနော်...။
မိနစ်၂၀လောက်ကြာတော့ကောင်မလေးဆီ သူစိမ်းတယောက် အပြေးရောက်လာတယ်...။
သူစိမ်း.. -ညီမက ကောင်လေး ရဲ့သူငယ်ချင်းလား....။
ကောင်မလေး..- ဟုတ်ကဲ့..။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဟင်..။
သူစိမ်း..- အရက်သမားတစ်ယောက်မောင်းလာတဲ့ကားက ကောင်လေးကိုတိုက်မိလ့ကောင်လေးဆေရုံမှာ..အရေးပေါ်ခန်းထဲမှာ
ည၁၁နာရီ ၅၇မိနစ်.... ဆရာဝန် အရေးပေါ်ခန်းထဲက မျက်နှာမကောင်းဘဲထွက်လာပြီးကောင်မလေး လက်ထဲကို
Apple juice လေးနဲ့ စာတစောင် ကမ်းပေးလိုက်တယ်...။ဆရာဝန်က၀မ်းနည်းတဲ့အသံနဲ့ ...ဒါကျနော်တို့့ကောင်လေးရဲ့အိတ်ထဲကရတာပါ...
ကောင်မလေးကသွေးတွေပေနေတဲ့စာကို တုန်တုန်ရင်ရင်နဲ့ ဖွင့်ဖတ်လိုက်တာပေါ့..။စာထဲမှာရေးထားတာကတော့........
ဒီ game လေးကစားနေချိန်မှာဘဲ မင်းကိုကိုယ်အရမ်းအရမ်းချစ်မိသွားပြီကွာ...။မကြာခင်ဒီ game လေးပြီးတော့မယ်နော်..။
gameလေးပြီးသွား ပေမယ့် မင်းကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူအဖြစ် ဆက်ရှိနေပေးပါလားနော်...။ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးစာအတွက်ချစ်သူပေါ့...။
ကောင်မလေးက စာရွက်လေးကို တင်းတင်းဆုတ်ကိုင်ရင်းဝမ်းနည်းပက်လက်ငိုပါတော့တယ်....။
"ကောင်လေးရယ်...မသေပါနဲ့ နော်...မသေပါနဲ့ ... တို့ လည်းမင်းကိုအရမ်းချစ်ပါတယ်..။ တို့ တွေတောင်ပေါ်သွားတဲ့နေ့
့ကိုမှတ်မိသေးလားဟင်...။ကြယ်ကြွေတာမြင်လိုက်ရတဲ့နေ့ လေ..။အဲဒီတုန်းကကြယ်ကြွေတုန်း..တို့ မင်းနဲ့ ဒီgame
လေးပြီးလည်း ထာဝရအတူနေနိုင်ပါစေလို့ တို့ ဆုတောင်းခဲ့တယ်သိလား.....၊ကျေးဇူးပြုပြီးတို့ ကိုမထားခဲ့ပါနဲ့ နော်...။ကောင်လေး
မင်းကိုငါချစ်တယ်သိလား...တို့ ကိုခွဲသွားလို့ မဖြစ်ဘူးနော်....။"
နာရီလက်တံလေး ၁၂ကိုရောက်သွားတယ်.... ရက် ၃၀ ပြည့်တဲ့အချိန်ပေါ့.........။
ကောင်လေးရဲ့နှလုံးခုန်နှုန်း ထာဝရ ရပ်တန့်သွားခဲ့တယ်......
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူ ကို ချစ်တဲ့အကြောင်းခုဘဲဖွင့်ပြော လိုက်ပါ...
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Tuesday, January 06, 2009 in ဇာနည်ကြိုက်တာဒါလေးတွေ
လ၀န်းကပင်လျှင် ရနံ့ လင်းလင်းကလေးဖြင့် ပွင့် နေသည်။ ကြယ်အဖွားအို တွေက ဗျစ်တောက်တောက်နှင့်။ မိန်းမတစ်ယောက်က ပိုက်ဆံဆယ်ပြား လိုက်ရှာနေသည်။ တွေ့လျှင်သူတောင်းစားကို ပေးမည်ဟု သိရ၏။ သူတို့အကြောင်းကို ကျွန်တော် ဆက်မတွေးချင်တော့။ ခြောက်ကြိုးလုံးကိုလျှော့ထားလိုက်ပြီ။ ၀တ်ရုံက ဖားဖားကြီး ဖြစ်သည်။ ဓါတ်ပြားက ပြားပြားကြီးဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ထိုသူရဲကောင်းကို ကြည့်ရသည်မှာ ဖားအပြားကြီးနှင့် တူနေသည်။ သစ်သီးအကြွေ ကောက်ကြမလား။ သူတစ်ပါး၏ ကြယ်ကြွေသံကို နားထောင်ရမှာ မသထီစရာပေ။ ငှက်ကအတောင်ပံနှင့် ပျံ၏။ နေလုံးက တောင်ပံမပါဘဲ ပျံသည်။ ဘာထူးခြားသလဲ။ ဖြစ်နိုင်ချေဆိုသည်ကတော့ များနိုင်သည်။ အားလုံးက ပန်းတစ်ပွင့် ထဲပေါ်မှာ ခုံနံပါတ် လုပြီးထိုင်နေနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့် ကိုကိုယ် ချောင်းကြည့်စမ်းပါ။ ချောင်းကြည့်ပေါက်ကိုတော့ ဘုရားသခင်ဆီ မှာမေးကြည့်ပေါ့။ အချို့ ချောက်ကမ်းပါး နှစ်ဘက်က လူတစ်ရပ်စာမျှသာ ကွာဝေးနိုင်သည်။ ကျွန်တော် ခုန်မကူးဖြစ်ပါ။ ကျွန်တော်က လူမဟုတ်၍ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့တည်းမဟုတ် လူတစ်ယောက်အပေါ် ခုန်မကူးချင်၍လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ကိုယ့်ထက်အရပ်မြင့်သော တောင်ဝှေးကို ဘယ်အချိန်မှာ ဆုပ်ကိုင်ရမည်လဲ....။ အဲဒီကြက်ဖကြီးလို ပျင်းပျင်းတွဲတွဲသာ တွန် လိုက်ချင်သည်။ လေးသည်တော်က သူ့မြားကို လိုက်အော်ခေါ် နေသည်။ လောကကြီးက ၀ိုင်းကြီးပတ်ပတ် ဒူဝေသည်။ ရေထဲမှာ မျောရင်း ခြေချော်လဲနေသည်။ ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ပြည့်စုံပြီး အင်္ကျီဝတ်ထားသည့် လူသုံးယောက်ရောက်လာသည်။ အားလုံး တည့်မတ်သော်လည်း တစ်ခုခုလွဲနေ၏။ ပုလွေမှုတ်သံကိုရော ကြားသလား။ မြွေတွေကြားမှာ အစွယ်မချိုးဘဲ ကကြည့်စမ်းပါ။ မျက်ရည်ဆိုတာကရော ဘာတုန်း။ မျက်လုံးထဲ သဲဝင်လို့လား။ နှလုံးသားထဲ သဲဝင်လို့လား။ ထုံးစံ အတိုင်း ကျွန်တော့်စိတ်တို့မကွဲပြားခဲ့ပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မစံပယ်ဖြူ ကို ကျွန်တော် ချစ်သည်။ သူ့အကြောင်း ကဗျာတွေရေးရတာ... မပျံနိုင်သော ငှက်စုန်းတစ်ကောင် တောင်ပံခတ်နေရသလို ညို့ပြာသည်။ ပွင့်ချပ်က လေးခုတည်း။ ဖယောင်းတိုင် အလင်းက ဘာကြောင့် အ၀ါတဖွဲဖွဲ ဖြစ်နေရတာတုန်း။ ၀ုန်းဆိုပြီး မိကျောင်းက ထပွက်သည်။ မိစ္ဆာသည် တစ်ယှူဇနာမှ လှမ်းကြည့်ရဲ သူအတွက် တစ်မျိုးတစ်ဖုံ လှပနိုင်ပါသည်။ အဲဒီနေရာကို မသွားပါနဲ့ ကလေးရယ်။ အမေ့ရင်ခွင်က အလွန်ကျယ်မြပါသည်။ အိပ်မက်ကို ငံပြာရည်လို ချိုပစ်လိုက်၏။ ဘ၀က ဖိနပ်ကို ကြိုးငုံ့ ချည်နေတုန်း ........။ မစံပယ်ဖြူက ကျွန်တော့်ကို မုန်းသွားသည်....။
Name Icons and Folders in Myanmar
ကွန်ပျူတာတွေမှာ ဖိုလ်ဒါတွေ၊ အိုက်ကွန်တွေကို မြန်မာလို နာမည်ပေးချင်ရင် အလွယ်လေး။ သိပြီးသားလူတွေလည်းရှိမှာပါ။
ဒါက မသိသေးတဲ့ လူတွေအတွက်ပါ။ ပထမဆုံးကတော့ ကိုယ့်စက်ထဲမှာ မြန်မာဖောင့်တော့ ရှိရမှာပေါ့။ မရှိသေဘူးဆိုရင်
ဒေါင်းလုပ် လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးပြီဆို ဟောဒီလိုလေးတွေ လုပ်လိုက်ရင်ရပြီ။ပထမဆုံး Desktop ပေါ်မှာ Right Click လုပ်လိုက်။
Properties ကိုသွား - Appearance ဆိုတဲ့ Tab ကိုနှိပ်။ အဲဒီမှာ ညာဘက်အောက်နားက Advance ဆိုတာကို ထပ်နှိပ်လိုက်။
Box တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်။ Item ဆိုတဲ့ Drop Down list ထဲမှာ icon ကိုရွေးလိုက်ရင် Font list တွေ့လိမ့်မယ်။ ကိုယ်ကြိုက်
တဲ့ဖောင့်ကို ရွေးလို့ရတယ်။ မြန်မာလိုရေးချင်တာဆိုတော့ ဇော်ဂျီ ကိုရွေးလိုက်ပေါ့။ ဖောင့်အရွယ်အစားကိုလည်း ပြောင်းလို့ရတယ်။
၈ လောက်ဆို အတော်လောက်ပါပဲ။ ပြီးရင် Ok ကိုနှိပ်။ Properties Box ကိုလည်း Ok နှိပ်ပြီး ပိတ်လိုက်ပေါ့။Title Bar မှာပါ မြန်မာ
လိုပေါ်ချင်ရင် Item ဆိုတဲ့ Drop Down list ထဲမှာ Title Bar ကိုရွေးပြီး ဖောင့်ပြောင်းပေးလိုက်ပါ။ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့
icon တွေ folder ကိုသွားပြီး rename လုပ်လိုက်ပါ။ တစ်ချို့ဟာတွေက မြန်မာလိုနာမည်ပေးလိုက်ရင် စက်ကနားမလည်တာတွေ
ရှိတယ်။ ဂိမ်းအတွက် .exe ဖိုင်တွေဆိုရင်တော့ မရဘူး။ အဲ… တစ်ခုအခက်အခဲ ရှိနိုင်သေးတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ Recycle Bin ကို
Rename လုပ်လို့မရတဲ့ ပြသနာပါ။ လုပ်လို့ရပါတယ်။ နည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါကအလွယ်ဆုံးနည်းတစ်ခုပါ။ ဟောဒီဟာကို
Notepad ထဲပဲဖြစ်ဖြစ် ကူးထည့်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် .reg ဆိုတဲ့ ဖိုင်အနေနဲ့ ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ သိမ်းလိုက်ပါ။ ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်။ လုပ်ပြီးရင် အဲဒီဖိုင်ကိုဖွင့်လိုက်ပေ့ါ။
REGISTRY ထဲကို ထည့်မလားလို့ မေးလာလိမ့်မယ်။ YES ကိုပဲ နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် နာမည်ပြောင်းပေးလို့ရပါပြီ။
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Saturday, January 03, 2009 in ဟာသ
ကိုလှ။ ။ဒီနေ့ဘာနေ့လဲဗျ ?
ကိုမြ။ ။စားပွဲပေါ်မှာ ဒီနေ့သတင်းစာရှိတယ်လေ။ ကြည့်လိုက်ပေါ့ကွ။
ကိုလှ။ ။မရှိဘူးကွ။ အဲဒါ မနေ့က သတင်းစာ။…… ............
သားငယ်...။မေမေ နတ်မိမယ်ဆိုတာ ဘယ်လို မျိုးလည်းဟင်...
မိခင်...။ နတ်မိမယ်ဆိုတာ အင်မတန်ချောမောလှပ ပြီး ကောင်းကင်မှာ ပျံနိုင်တဲ
့နတ်သမီးတစ်ပါးလိုပါပဲ သားရဲ့ ။
သားငယ်...။ဟင်...ဒါဆိုသားတွေ့ လိုက်တဲ့ နတ်မိမယ် က မပျံတတ်ဘူးမေမေ။
မိခင်......။သားက ဘယ်တုန်းကများတွေ့ တာတုန်းသားရဲ့ မေမေကိုပြောပါဦး။
သားငယ်...။ မနေ့ က ဖေဖေ က ဟိုဘက်ခန်းမှာနေတဲ့ အန်တီရဲ
့တင်ပါးကိုပုတ်ပြီး မင်းဟာနတ်မိမယ် ပါပဲကွာ တဲ့...
" ညကြီးမင်းကြီး ခြေအိတ်ကို ခေါင်းမှာပတ်ပြီး ဘာထွက်လုပ်နေတာလဲ "
" ကျွန်မ ယောင်္ကျားက မှာထားလို့ပါ။ သူခရီသွားနေတုန်း ညဘက် အပြင်ထွက်ရင်
လူရမ်းကားတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ ခြေအိတ်အထက်ပိုင်းကို မထိစေနဲ့ဆိုလို့ "
" ခုနက စတိတ်ရှိုးပေါ်မှာ အသံပြဲကြီးနဲ့ ဟဲဗီးသီချင်းဆိုသွားတာ ခင်ဗျား မဟုတ်လား "
" ဟုတ်ပါတယ် ဟုတ်ပါတယ် ၊ ကျွန်တော်က တက်သစ်စ အဆိုတော်ပါ "
" ဒါဆို တဆိတ် ကူညီစမ်းပါဗျာ။ ပွဲခင်းထဲမှာ ကျုပ်မိန်းမနဲ့
လူချင်းကွဲသွားလို့ ခပ်ကျယ်ကျယ် အော်ပေးစမ်းပါ။သူက နားနည်းနည်းလေးတယ် "
" အဲဒီလူနဲ့ သမီး လက်မထပ်ချင်ဘူး မေမေ ၊ သူနဲ့သမီးနဲ့ အယူအဆချင်း
မတူကြဘူး။ သူက ငရဲရှိတယ် ဆိုတာကို မယုံဘူးလို့ အကြောက်အကန် ပြောတယ်
" လက်ထပ်မှာသာ ထပ်လိုက်ပါ သမီးရယ် ၊ ငရဲ တကယ်ရှိကြောင်း သိအောင်လုပ်ဖို့
မေမေ့တာဝန် ထားလိုက်စမ်းပါ "
" ကဲပါ ယုံပါပြီ ရှင်ရယ် ၊ ဒီညနေ ရုပ်ရှင်လိုက်ပြဖို့ ချိန်းထားတာလည်း
" စိတ်ချ စိတ်ချ ဖဲဝိုင်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင် ဆက်ဆက် လာခေါ်မယ် စောင့်နေ
အဲ့ဒီကုတင်အောက်က ထွက်ခဲ့၊ ယောက်ျားပီပီ သတ္တိရှိရှိ ကျုပ်ကို
ရင်ဆိုင်စမ်းပါတဲ့ ... ...... ဟီး ဟီး …။
ကောင်မလေး = အရင်လူတွေထက် ပိုချစ်တယ်
မောင်ချစ် ။ ငါတော့ ငါ့သားအစား ဂုဏ်ယူတယ်ကွ။ ခုဆေးကျောင်းကို ရောက်နေပြီလေ။
မိတ်ဆွေ ။ အော် .. ဟုတ်လား .. ဘာစာတွေလေ့လာနေပြီလဲ ?
မောင်ချစ် ။ ဟုတ်ဘူးကွ။ ငါ့သားက လေ့လာနေတာမဟုတ်ဘူး။ ငါ့သားကို သူတို့က
အဘွားအိုတစ်ဦးဟာ မင်္ဂလာဆောင်ပြီး မကြာသေးတဲ့ ချွေးမကို ကြည့်ဖို့
သားအိမ်ကို ရောက်သွားခဲ့တယ်။ လူခေါ်ဘဲလ်တီးပြီး တံခါးဖွင့်လာတော့
ဘာအ၀တ်အစားမှ ၀တ်မထားတဲ့ ချွေးမကို တွေ့လိုက်တယ်။ ချွေးမကို ကြည့်ပြီး
အဘွားအိုက အလန့်တကြား မေးတယ်။
ချွေးမကို ဘာမှ ဆက်မပြောတော့ဘဲ အဘွားအို လှည့်ပြန်လာခဲ့တယ်။
အိမ်ရောက်တာနဲ့ အဘွားအိုဟာ ရေမိုးချိုး၊ အမွှေးအကြိုင်တွေ ဆွတ်ပြီး
ဘာအ၀တ်အစားမှ မ၀တ်ဘဲ တံခါးဝမှာ သွားရပ်နေခဲ့တယ်။
တအောင့်ကြာတော့ အဘိုးအို ပြန်ရောက်လာတယ်။ အ၀တ်ဗလာနဲ့ ရပ်နေတဲ့
အဘွားအိုကို မြင်တော့ လန့်ပြီး "ဒါ ဘာလုပ်တာလဲ" လို့ အော်လိုက်တယ်။
"ဒါ ည၀တ် အချစ်အင်္ကျီလေ" လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တော့ အဘိုးအိုက
" ဟာ မင်းည၀တ်အင်္ကျီက မီးပူထိုးသင့်နေပြီ။ ကြည့်စမ်း
ဟိုကြယ်သီးနှစ်လုံးကလဲ ပြုတ်ထွက်တော့မယ်" လို့ ပြန်ပြောလိုက်သတဲ့။
လူတစ်ယောက်ဟာ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲကို "အသုံးမကျတဲ့လူ" လို့ ပြောလို့
အဖမ်းခံရသတဲ့။ ရုံးတင်စစ်ဆေးပြီးနောက် တရားသူကြီးက သူ့ကို ထောင်ဒဏ်
၁၀နှစ်နဲ့ ၆ရက် အမိန့်ချလိုက်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်ကြီးလေးတဲ့
အပြစ်ကိုပေးရသလဲလို့ မေးတော့ တရားသူကြီးက " ပြစ်ဒဏ် ၆ရက်က
နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲကို စော်ကားတဲ့အတွက် ပြစ်ဒဏ် ၁၀နှစ်က
နိုင်ငံတော်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဖော်ကောင်လုပ်တဲ့အတွက်" လို့
တစ်ခါက နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ ခေါင်းဆောင်သုံးဦးဟာ ရဟတ်ယာဉ်စီးပြီး
ပထမ အကြီးအကဲ " တကယ်လို့ အခုချိန်မှာ ငါသာ ငွေတစ်ထောင်တန်တစ်ရွက်
ပစ်ချလိုက်ရင် ကောက်ရတဲ့လူက အရမ်းပျော်မှာပဲ"
ဒုတိယ အကြီးအကဲ " တကယ်လို့ ငါသာ ၅၀၀တန်နှစ်ရွက် ပစ်ချလိုက်ရင်
တတိယ အကြီးအကဲ "တကယ်လို့ ငါသာ ၁၀တန်ဆယ်ရွက် ပစ်ချလိုက်ရင် လူဆယ်ယောက် ပျော်ရမယ်"
သူတို့အချင်းချင်း ပြောနေတဲ့ စကားကိုကြားတော့ လေယာဉ်မှုးက အခုလို ပြောလိုက်သတဲ့...
"အကြီးအကဲတို့ သုံးဦးလုံးသာ ခုန်ချလိုက်ရင် နိုင်ငံမှာရှိတဲ့
လူတွေအားလုံး ပျော်ကြမှာပဲ" ဟူတည်း။